सामाखुशीको एक घरवाट ४ जना पक्राउ ! शंका लागेर चेकजाँच गर्दा छक्क पर्‍यो प्रहरी – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/सामाखुशीको एक घरवाट ४ जना पक्राउ ! शंका लागेर चेकजाँच गर्दा छक्क पर्‍यो प्रहरी
काठमाडौ – झण्डै दुई किलो यार्चागुम्बासहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले चार जनालाई एक किलो ८५० ग्राम यार्चागुम्बासहित पक्राउ गरेको हो।
एमसीसीको विरोधमा अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन, १० जना पक्राउ – अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को विरोधमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले ‘एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान’ का १० जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर अर्को साता नेपाल आउने तय भएको छ । उनको साथमा अर्का सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपाल आउने छन् । उनी नेपाल आउने भएसँगै सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोजेको हो कि भनेर एमसीसीको विपक्षमा रहेकाहरुले सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् । एमसीसीबारे राजनीतिक दल र तिनका नेता समेत विभाजित हुँदै आएका छन् ।